Maxkamad ku taal Mareykanka oo 9-sano ku xukuntay nin Eritrean ah oo xiriir la lahaa Al-Shabaab – idalenews.com
Maxkamad ku taal dalka Mareykanka ayaa sagaal sano oo xarig ah ku xukuntay nin u dhashay dalka Eritrea, kaasoo lagu helay dambi ah inuu xiriir la lahaa Xarakada Al-Shabaab oo ka dagaalanta Soomaaliya.
Ninkan oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Macalin Axmed ayaa waxaa ay maxkamad ku taal New York ay ku xukuntay 9-sano oo xarig ah,isagoo lala xiriiriyay inuu taageerayay Al-Shabaab ee Mareykanka horay ugu calaamadeeyay liiska waxa loogu yeero argagixisada.
Ahmed ayaa Maxkamada waxay sheegtay inuu qirtay danbigii lagu soo eedeeyay bishii June, isagoo muteystay 9-sano iyo ilaa iyo 3-bilood oo xarig ah.
Muwaadinkan u dhashay dalka Eritrea ayaa laga qabtay dalka Nigeria sanadkii 2009-kii, iyadoo kadib loo gacan geliyay dowladda Mareykanka.
Danbi oogayaasha ayaa tilmaamay in shaqsigan xukunka uu ku dhacay ay ku cadaadty in Tababar ku aadan sida la isu qarxiyo iyo waliba sida loo fuliyo weerarada gaadmada ah uu ka helay Al-Shabaabka Soomaaliya.
Al-Shabaab ayaa waxaa sanadkii 2008-dii uu Mareykanka ku daray liiska Argagixisada, iyadoo Mareykanka gudaha soomaaliya ka fuliyay weeraro ka dhan ah Hogaamiyaasha ugu sareeya.